काठमाडौं-७ मा वामदेव चुनाव उठ्नेबारे... :: सेतोपाटी टिम :: Setopati
काठमाडौं-७ मा वामदेव चुनाव उठ्नेबारे मतदाता के भन्छन्? ५१ जनाको अभिमत जस्ताको तस्तै
सेतोपाटी टिम काठमाडौं, असोज २५
बर्दिया- १ बाट चुनाव हारेका नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई संसदमा ल्याउन काठमाडौं- ७ का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामवीर मानन्धरले राजीनामा घोषणा गरेका छन्। मतदाताले उनलाई चुनेको एक वर्ष नपुग्दै सांसदबाट राजीनामा गरेका रामवीर र काठमाडौं -७ मा चुनाव लड्न तयार वामदेव गौतमबारे सो क्षेत्रका मतदाता के भन्छन्?
टिम सेतोपाटीले बुधबार दिनभरि काठमाडौं-७ को फरक-फरक ठाउँका ५१ मतदातालाई भेटेर कुराकानी गरेको थियो। उनीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै।
सीता श्रेष्ठ, नरदेवी
फेरि चुनाव हुन लाग्यो रे? भोट हालेको एक वर्ष पनि भएको छैन। फेरि किन चुनाव हुन लागेको होला।
मलाई चुनावमा त्यति मतलब छैन। आफ्नो काम गर्ने हो बस्ने हो। राजनीतिले के दिन्छ र खै। अस्तिको पालि भोट हालेर पनि केही विकास भएको छैन। यसपालि फेरि चुनाव भयो भने त म भोट हाल्न पनि जान्न होला।
सानुराजा महर्जन, नयाँबजार
रामवीरलाई नै भोट दिएर जितायौँ। अब हारेका वामदेव यहाँ आएर चुनाव उठ्ने रे। चुनाव पनि हुने अरे। राम्रो काम नगरेरै त उनले पहिला बर्दियामा हारेका होलान्। त्यहाँका जनताले भोट नदिएका होलान्। अनि त्यस्तो मान्छेलाई यहाँ ल्याएर किन उठाउने?
नरेन्द्र श्रेष्ठ, बालाजु बाइपास
रामवीर मान्छे त ठिकै थिए किन राजीनामा गरेछन्? अब चुनावै गरे त भोट हाल्न जानुपर्ने होला। तर जो आएपनि केही गर्ने होइनन्।
नारायणमान कायस्थ, टुन्छेगल्ली
रामवीरले किन राजीनामा दिएका रैछन? तपाईंलाई थाहा छ। यो त सरासर हाम्रो भोटको अवमूल्यन भयो नि। अस्तिको चुनावमा मैले उनैलाई भोट हालेको थिएँ। अब आयो भने त नेकपालाई सहयोग गर्दिनँ। वामदेव गौतम यहाँका मान्छे होइनन्। हामीले उनलाई किन भोट हाल्ने? मलाई त अब नेकपाको जो आए पनि यहाँ जित्दैन जस्तो लाग्छ। मान्छेले त एकचोटि विश्वास गरेर पठाउँछन् नि फेरि जो आउँछ उसैलाई भोट हालेर किन जिताउँछन्।
सोना थापा, वनस्थली
हिजो बेलुका टिभीमा समाचार हेर्दा थाहा पाएँ रामवीरले राजिनामा दिएछन्। अर्को चुनाव हुने रे । सुन्दै दिक्क लाग्यो। जसलाई जिताए नि यस्तै रैछ। अब त भोट हाल्नै जान्न।
माया श्रेष्ठ, बालाजु बाइपास
हेर्नु, बाटोमा यस्तो धुलो छ। यत्ति बाटो कसैले बनाउँदैन। हामीलाई चाहिएको त विकास हो। बाटोघाटो राम्रो होस् भन्ने हो। त्यसैले जसले राम्रो काम गर्‍यो उसैलाई भोट दिने हो। चुनाव फेरि हुने भन्ने थाहा थिएन। एकै वर्षभित्र चुनाव हुन्छ र?
चौथीकृष्ण सुवाल, नरदेवी टोल
हुन त म कम्युनिष्ट होइन पहिलादेखि नै कांग्रेस हुँ। तर मलाई रामवीरले राजीनामा दिएको ठीक लागेन। पैसा खाएर राजीनामा दिएको रे भन्ने हल्ला सुनेको हो। जितिसकेको मान्छे फेरि किन राजीनामा दिनु परेको होला?
वामदेव गौतम यहाँबाट उठे जित्दैननजस्तो लाग्छ। किनकी कि उनी यहाँका मान्छे होइनन्। चुनाव भयो भने कांग्रेसले जित्छजस्तो लाग्छ मलाई कि अरू कुनै पार्टीको यहीँको उम्मेदवारले जित्छ।
सुजन श्रेष्ठ, बालाजु बाइपास
जनताले जिताएर पठाएको मान्छेलाई बिनाकारण राजीनामा गर्न लगाएर फेरि चुनाव गराउने त लोकतन्त्रकै उपहास हो। वामदेवलाई जसरी ल्याइँदैछ त्यो जनमतको पनि उपहास हो। एउटा पार्टीको त्यो पनि गुटको नेता बनाउन चुनाव गरेर राज्यकोष दोहन गर्न खोजिदैँछ त्यस्तो नि राम्रो काम हुन्छ?
किरण मानन्धर, बालाजु बाइपास
रामवीरले पद बेचे। वामदेवले किन्यो। यत्रो भोट दिएर जिताएको मान्छेलाई नसोधी राजीनामा गर्ने? भोट दिएका जनतालाई लात हानेर जाने? मलाई त यहाँको जनताले नि अब चुनाव भए बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँ सार्वजनिक शौचालय छैन। यो फोकटको चुनाव गर्ने पैसाले त शौचालय बनाए हुन्न?
नवीन शाक्य, मच्छिन्द्रवहाल
साथीहरूले सुनाएपछि थाहा पाएको रामवीरले राजीनामा दिए भन्ने। यो सुनेर मलाई निकै दु:ख लागेको छ किनकी फेरि चुनाव हुने भनेको त हामीले तिरेको पैसा खर्च गरेर त हुने हो नि। ११ करोड रूपैयाँ लाग्छ रे उपनिर्वाचन गर्न।
अर्को कुरा रामवीरलाई यहाँका जनताले भोट दिएर जिताएर पठाएका हुन् नि। पार्टीले त होइन। अनि अहिले पार्टीले जे भन्यो त्यही मान्ने जनता के भन्छन् केही नसुन्ने, पार्टीको मात्र हित हेर्ने, जनताको हित नहेर्ने?
वामदेव आएपछि म त भोट हाल्दिनँ। किनकी यो त सरासर जनतालाई धोका हो नि। उताबाट हारेको मान्छेलाई सांसद बनाउन फेरि यहाँ चुनाव गर्ने। गणतन्त्र आयो भन्छन् अनि सबै कुरा उनीहरूले नै भनेको हुनुपर्ने? उपचुनावको कुनै औचित्य छैन।
भुपेन बस्नेत, बोहराटार
पाँच वर्षको लागि चुनाव भएको थियो। एकै वर्षमा त्यस्तो के भयो र राजीनामा दिनुपर्ने? रामवीरलाई त जे भएपनि मान्छेले मान्थे। राम्रै ठानेर भोट दिएर पठाएको। सक्षमलाई हटाएर वामदेवजस्तो असक्षमलाई ल्याउन चुनाव गर्ने? वामदेवले त पहिले पनि एमाले फुटाएर माले बनाएको मान्छे हो। अहिले फेरि के गर्न खोजेको? पार्टीभित्र जे गर्न खोजे पनि यो देशको लागि घाटाको विषय हो। वामदेवलाई सांसद बनाउन राज्यले किन पैसा खर्च गर्ने?
दया चित्रकार, रानीवन
किन राजीनामा दिएको रैछ, तपाईंलाई थाहा छ? म खासै राजनीतिमा चासो राख्दिनँ त्यसैले थाहा हुन्न। चुनावै भैहाल्यो भने भोट त दिनुपर्ला। तर राम्रो मान्छे रोजेर दिने हो।
वैतराज शाक्य, केलटोल
मलाई रामवीरले राजीनामा दिएको राम्रो लागेन। जितिसकेको मान्छे बेकारमा किन राजीनामा दिएको होला। म पहिलादेखि नै कम्युनिष्ट हो। तर अब भोट हाल्दिनँ। हामीले उनलाई चुनाव जिताएर पठाएपछि हामीसँग आएर यस्तो भयो,राजीनामा दिन्छु भनेर एक पटक सोधे हुन्नथ्यो।
चुनाव गर्न ११ करोड खर्च हुन्छ रे त्यो हामीले तिरेको पैसा हो नि। फोकटमा खर्च हुने भयो।
चुनाव भइहाल्यो भने म नेवार उम्मेदवारलाई भोट दिने हो। नभए विवेकशील साझाको उम्मेदवार जो हुन्छ उसैलाई दिने हो। किनकी त्यो पार्टीले केही गर्छ भन्ने मलाई ९० प्रतिशत आशा छ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः रामवीरका चुनावी कमाण्डर भन्छन्- वामदेवका लागि कसरी भोट माग्नु?
नवराज कार्की, वनस्थली खरिबोट
पाँच करोड खाएर राजीनामा दिएछन्। यस्तो व्यवहार मन परेको छैन। हेर्नुस् त सडकमा यत्रायत्रा खाल्डा छन् तिनलाई पुर्ने पैसा चुनावमा खर्च गर्ने? हामीबाट कति धेरै कर उठाएको यही गराउन हो? देश नर्क भैसक्यो। कञ्चनपुरकी निर्मलालाई बलात्कार गरेर मार्ने मान्छे समात्न सकेको छैन। देशमा यस्तो डर मर्नु छ, नेतालाई पदकै चिन्ता। मलाई त मन परेन यस्तो राजनीति।
राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, वनस्थली
कति पैसा खाएर राजीनामा गरेको रैछ? समाचारमा सुनेर थाहा पाएको रामवीरले त राजीनामा पो दिएको। वामदेवलाई किन सांसद हुनु परेको रैछ? यीनीहरूले नि देश बनाउलान भनेको खै यस्तो छ हालत। कि राजा ल्याउनुपर्छ अब?
प्रकाश श्रेष्ठ, नरदेवी
वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउन रामवीरले राजीनामा दिएको कुरा समाचारमा पढेँ। अत्यन्तै दुःख लाग्यो। पाँच वर्षका लागि भनेर भोट माग्न आउँदा आँखा चिम्लेर भोट दिएको थिएँ। वामदेव अरुको भाग खान किन यहाँ आउन लागेका हुन्? यदि चुनाव भइहाल्यो भने भोट कसलाई हाल्ने भन्नेमा मैले राम्ररी विचार गर्नुपर्छ।
लक्ष्मी मानन्धर, नरदेवी
फेरि चुनाव? एक वर्षअघि त भोट हालेकी थिएँ। यस्तो राजनीतिक खेल देख्दा दिक्क लाग्छ। मैले रामवीरलाई चिनेकी हुँ, वामदेवलाई होइन। को हुन् वामदेव? राम्रो काम गर्ने व्यक्ति नै चुनिनुपर्छ। वामदेवलाई नचिनेको हुनाले मैले घर परिवारमा सल्लाह गर्नुपर्छ। चुनाव भयो भने कसलाई भोट हाल्ने अहिले केही भन्न सक्दिनँ।
रामहरी ढकाल, वनस्थली
फेरि चुनाव गर्ने त ठिक कुरा होइन। यहिँकाले त केही गरेन अब बाहिरबाट आएको वामदेवले के विकास गर्छन् र यहाँ। अहिले चुनाव गर्नु भनेको राष्ट्रको ढुकुटी सक्नु हो। यो त नेताले जनतालाई कठपुतली बनाएको भयो। जनमतको कदर छैन नेताहरूलाई उनीहरूलाई मनलागे जे पनि गर्ने त भएन।
अमृत मानन्धर, नरदेवी
किन वामदेवलाई यहाँ ल्याउन खोजेको हो? उनको एजेन्डा के छ यहाँ? पार्टीले जे अह्राउँछ त्यही गर्ने? यस्तो व्यक्तिसँग हामीले मतलब राख्नु नै बेकार हो। राजीनामाबारे हामीलाई सोध्नुपर्दैन? हामी त कारण खोज्छौं। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही कुरालाई समर्थन गर्न सकिँदैन।
बालाजु बाइपासकी श्रेष्ठ थरकी महिला– नाम बताउन चाहिनन्।
ए चुनाव हुने थाहै थिएन। तर यति छिटै पनि चुनाव हुन्छ र? ठिकै पनि भयो। रामवीरले केही काम गर्ने होइन। सकेको थिएन। रामवीरले नै त हो बाटो बनाउने भनेर मान्छेका घरबार भत्काए हेर्नुस्। बाटोको हालत यस्तै छ। धुलोले यहाँ बसिसक्नु छैन। वामदेव आएर राम्रो काम गरे त के भयो र? उनले राम्रो गर्छन्?
श्रृजना मानन्धर, डल्लु
रामवीरले राजीनामा दिएको सुनेकी छु। अघिल्लो निर्वाचनमा बुथ प्रतिनिधि थिएँ। यसपालि भोट हाल्ने जाने मनै छैन। जनता मान्छन् त फेरि चुनाव गर्न?
किन राजीनामा दियो पनि थाहा छैन। जहिल्यै कुर्सी तानातान मात्र गर्ने भए। म त भोट हाल्न नजानुपर्ला।
सुनील कपाली, काठमाडौं-२५
रामवीर मानन्धरले निर्वाचन क्षेत्र छोड्दा चित्त दुखेको छ। हामीले भनेर केही हुँदो रहेनछ। उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेकै हो भने चुनावको माहोल र प्रतिस्पर्धी कस्तो आउँछ हेर्छु। वामदेव एउटा मात्र चुनाव लड्ने त हैनन होला। जे गर्छु, देशको लागि राम्रो गर्ने मान्छेको निम्ति गर्छु। रामवीरले किन छोडे? हामीलाई भन्नुपर्छ। हाम्रो नेवार समुदायको सिट खोसियो। घेराबन्दीमा पारियो हाम्रो समुदायलाई।
श्रीकृष्ण खड्का, रानीवन
म भर्खर विदेशबाट आएको हो। अब पैसा सक्ने गरी चुनाव गरेर के हुन्छ। जसले पैसा खर्च गर्छ उसले जित्छ। सबै नेता चोरमात्र छन्।
माइला लामा, रानीवन
म २०५४ बाट एमाले भएको हो। त्यसअघि राप्रपा थिएँ। जसलाई जिताए पनि केही नहुने रहेछ। राजाले केही गर्छ कि भनेको गरेन। कांग्रेसले केही गरेन। एमालेले गर्ला भनेको खै एउटा निर्मला बलात्कार गरेर मारेको पनि पत्ता लगाउन सकेन। सरकारले काम गर्न नसकेपछि भोट के भनेर माग्ने? हामीलाई त माछा बेचेको जस्तो बेच्छन् नेताले। चार छोरा छन्। बुढी छ। तर म भोट हाल भन्न सक्दिनँ। यहाँ विद्यालय बनाउने काम गरेको भनेर सबैले मलाई मान्छ। एक पैसा नलिइकन यहाँका ठकुरीहरुको घर घरमा धारो जोडिदिएँ। अस्ती स्थानीय चुनावमा माइला मामा उठ भन्न आएका थिए नेताहरू। तर अब भोट दिएपनि माग्न सकिन्न।
बलराम ढकाल, रानीवन
दिँदैनन् कसैले वामदेवलाइ भोट। काठमाडौं छिर्दा श्वास फेर्न सकिन्न। सरकारले केही गरेकै छैन। कसले भोट दिन्छ। म त दिन्नँ। पहिला कसलाई दिइयो भन्ने कुरै भएन नि। वामदेवलाइ दिइन्न।
युद्ध अमगाईं, काठमाडौं-२५
म रामवीरको साथी हुँ। मैले उसैलाई भोट हालेको थिएँ। उसलाई राजीनामा गराएर वामदेव यहाँ आउन लागेको सुनेँ। वामदेव आए भने भोट हाल्ने कुरामा विचार गर्नैपर्छ।
त्योभन्दा बढी त हाम्रो जनमत र भावनालाई लात हानिएको छ। यो लातको जवाफ भोटबाट दिन्छु।
मतदाता हुँ। कसैलाई त भोट हाल्नैपर्छ। राजनीति बुझ्दिनँ। राम्रो मान्छे हेरेर भोट दिएको थिएँ। अब निर्वाचन भएछ भने मान्छे हेरेर भोट हाल्छु। कसलाई भोट दिन्छु भन्दिनँ। रामवीरलाई भोट दिएकै हो। कुरा मात्र गर्ने, काम नगर्ने नेता चाहिएको छैन।
शिवराम थापा, वनस्थली
कार्यकर्तालाई मनाए वामदेवले जित्छन्। तर रिसाएका उनकै कार्यकर्ता छन्। विपक्षीले त वामदेवलाइ भोट दिने कुरै छैन। मैले कसलाई भोट दिएको त भन्न मिलेन।
अनन्तमणि आचार्य, तारकेश्वर वडा नं. ५ वडा सदस्य
चुनाव भइहाल्यो भने त भोट हाल्नेपर्‍यो। तर, यहाँको स्थानीय मान्छे उठ्दा जे भनेर भोट मागिएको थियो। बाहिरको मान्छे चुनाव लड्न आउँदा त्यसरी भन्न नसकिएला।
हाम्रा केही माग छन्, चुनावअघि यहाँ केही न केही विकासको श्रीगणेश गरिदिनुपर्छ। जनताले देख्नेगरी, चित्तबुझ्ने गरी कसैले काम गरे भोट दिइहाल्छन् नि।
बिमला महर्जन/निर्मला महर्जन, गोलढुंगा
चुनाव गरुन् नगरुन्, जे गरे पनि हामीलाई के नै हुने रहेछ र? हिँड्ने बाटो राम्रो छैन। खानेपानी सुविधा छैन। चुनावमा हामीले भोट हाले/नहालेको मतलब छैन नेतालाई। हाम्रो समस्याबारे बोलिदिने कोही छैन। वर्षैपिच्छे चुनाव गर्ने, हाम्रो चाहना कहिले पूरा गर्ने?
अम्बिका गिरी, गोलढुंगा
फेरि चुनाव गर्न नेताहरू लागेका छन् भन्ने सुन्नमा आयो। खास कुरा के हो प्रष्टसँग थाहा छैन। जहाँसम्म भोट खसालेको कुरा छ, रामवीरलाई नै दिएकी हुँ। अब नयाँ नेता आएर चुनाव लड्न लागेका हुन् भने कसलाई भोट दिने परिवारमा सल्लाह गर्छु। हुन त जुनलाई भोट हाले पनि उही हो। कसैले केही गरेका छैनन्। जसबाट यो ठाउँका लागि उत्कृष्ट काम गर्ने भरोसा पाउँछु उसैलाई भोट दिन्छु।
रामेश्वर फुयाँल, गोलढुंगा
नेताले देश बेचेर खाए। रामवीरले जनताको भोट बेचे। पाँच वर्ष काम गर्छु भनेर गरेको बाचा कहाँ गयो? बीचमै छोडेर हिँड्नु भनेर हामीले भोट दिएको हो? रामवीरलाई दिएको भोट म वामदेवलाई भोट दिन्न। म एमालेको क्रियाशिल सदस्य हुँ। यहाँका जनता खटेर रामवीरलाई जितायौं, अहिले बीचमा मैले छोडेँ, अर्को लड्न आउँछ भनेर बाहिर–बाहिर भन्दै हिँड्ने? हामीमाझ आएर भन्न किन सकेनन्? हामी भेडाबाख्रा हो? जे भन्यो त्यही मान्ने?
भीमसेन फुयाँल, गोलढुंगा
रामवीरले ८/१० करोड पैसा लिएर राजीनामा गरेको हल्ला सुनेको छु। यो राजनीतिक चलखेल हो। यस्तो चलखेल गर्न पाइँदैन। रामवीरलाई हालेको भोट खेर गयो। यहीँको मान्छेलाई हालेको भोट खेर गयो। वामदेवलाई हालेको भोट रहला र? भो अब म भोट हाल्दिनँ।
गोपाल मानन्धर, खुसिबु नयाँबजार
म नेकपाको कार्यकर्ता हुँ, पहिले माओवादी थिएँ। हामीले पनि समाचारमा सुन्दैछौं हाम्रो क्षेत्रका सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा दिनुभयो रे। वामदेवलाई यो क्षेत्रमा चुनाव लड्नका लागि उहाँले राजीनामा दिनुभएको रे। चुनाव भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन। फेरि चुनाव गर्नु एकदम गलत हो। किनभने चुनाव जनताका लागि हो तर यो चुनाव नेताका लागि हुनेछ। त्यसमाथि हाम्रो क्षेत्रमा बाहिरको मान्छेलाई उठाउने कुरा भैरहेको छ। रामवीर यहाँ भिजेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई राजीनामा दिन लगाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने षड्यन्त्र हो। अब यहाँका जनताले रामवीरलाई राजीनामा किन दिइस् भनेर घाँटी समात्ने कि वामदेवलाई न्याक्ने ?
भाइराजा महर्जन, एमाले वडा कमिटी सदस्य- १७
अब पार्टी छाड्ने कुरा भएन। पहिलादेखि सूर्यमा भोट हालेको हो। वामदेव उठे भोट त दिनुपर्छ। तर सरकारमा बसेको मान्छेले जे मन लाग्यो त्यो गरेको छ। यस्तोमा भोट के भनेर माग्ने। स्थानीय मान्छेलाई पो सजिलो हुन्छ। बाहिरको मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ।
रामवीरले पनि राय सुझाव नलिगेर आफैँ छाडे। उनलाई मन्त्री बनाउँछन् भन्ने पनि के ठेगान।
हरिनारायण महर्जन, नयाँबजार खुसिबु
यसअघि त मैले एमालेका रामवीरलाई नै भोट दिएको थिएँ। अब उनले राजीनामा दिए रे। अर्को चुनाव गर्ने भन्दै छन्। यो बेकारको खर्चमात्र हो केही काम छैन। वामदेवलाई उठाउने भन्दैछन्। यहीँको मान्छे भएपो बाहिरको मान्छेलाई यहाँको बारे केही थाहा हुन्न।
सन्तोष श्रेष्ठ, डल्लु
म बाउले गर भनेको काम त गर्दिनँ। अब को नेताले भनेको मान्छ। बाहिरको मान्छेलाइ कसले भोट हाल्छ। यही विजय माली भन्ने मान्छे छ। ऊ कांग्रेसबाट उठ्यो भने जित्छ। तर सुदुरपश्चिमको मान्छे ल्याएर लडायो भने वामदेवले जित्छ। रामवीरले पैसा लिएर छाडेको भन्ने छ।
वसन्त मानन्धर, डल्लु
हार्न त नारायणकाजी पनि हारेको छ। तर वामदेवलाइ मात्र किन संसदमा आउनुपर्‍यो। वामदेवले चुनाव जित्न सक्छन्। २०५१ सालमा आइजिपी चेन्ज गरे चुनावका लागि। पैसा छ। जे पनि गर्छन्।
दीपक ढंगोल, खुसिबु
रामवीरले राजीनामा दिएको मलाई मन परेन। फेरि चुनाव गर्ने कुरा पनि राम्रो लागेन। कहाँको वामदेव आएर यहाँ किन चुनाव लड्ने। उनलाई यो ठाउँको माया पनि हुन्न केही गर्दा नि गर्दैनन्। यसअघि त मैले एमालेलाई नै भोट दिएको थिएँ अबचैँ दिन्न।
तीर्थनारायण महर्जन, खुसिबु
लौ फेरि चुनाव हुने कुरा छ? मलाई त थाहै थिएन। कतिपटक चुनाव गर्ने। मलाई त अब भोट हाल्ने मन छैन। खालि यसो गर्छौं उसो गर्छौं भन्छन्। करबाहेक केही बढाउँदैनन्।
दिपक डंगोल, नयाँबजार
अस्ति भर्खर त भोट दिएको हो । अब फेरि चुनाव गराएर राज्यको पैसा सक्ने? तपाईं आउनुअघि पनि हामीले किन राजीनामा दियो होला त भन्ने कुरा गरिरहेका थियौं। सायद वामदेवले केही दिन्छू भने रामवीरले लिन्छु भने अनि राजीनामा दिए। यो रामवीरको राजनीति सक्ने खेल हो। जसरी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर उठाए पछि बनाएनन् र उनको राजनीति सके त्यस्तै गर्न खोज्या होला।
रामकृष्ण प्रजापति, नयाँबजार
मलाई बेलाबेला लाग्छ- अब उखान टुक्का गर्न सिक्नुपर्‍यो राज्य चलाउन सकिने रैछ। एकदुई महिनामा त सिकिएला नि है? यतिन्जेल हामी यीनै राजनीतिका कुरा गरेर बसेका थियौं। राजनीति यस्तै रैछ। अहिले वामदेव गौतमलाई यो क्षेत्रको सांसद बनाउन चुनाव गर्ने रे। मैले पोहोर रामवीरलाई भोट दिएको हो, वामदेवलाई त दिन्न। फेरि चुनाव गर्ने भन्ने कुरै मन परेको छैन। साँच्चै चुनावका कुरा गर्ने हो भने त यहाँका जनताले ढुंगाले हानेर पठाउँछन् होला।
लालबहादुर महर्जन, डल्लु
हाम्रो परिवारमा छ जना मतदाता छन्। तर उपचुनावमा त भोट हाल्न नजाने। हाम्रो बाजेदेखि एमाले हो। म संगठित सदस्य हो। तर जो आयो त्यसको पछि लाग्ने मान्छे त होइन नि। हार्ने मान्छेले पाँच वर्ष कुर्नु पर्‍यो नि। जित्नेले पनि मतको सम्मान गर्नुपर्छ।
जनतालाइ मन नपरे पनि नेताले चाहे जे पनि हुने। रामवीरले मन्त्री हुन नपाए छाडेको रे। हामीले पसिना काढेर जिताएको हो। वडामा पहिला राम्रो काम गर्‍यो भनेर साथ दिएको हो। वामदेवले के गरेका छन्? वामदेवले विकास गर्छ भनेको छ। विकास गरेको भए बर्दियामा जितिहाल्थ्यो नि। अहिले घर आफ्नै घर अगाडि गाडी पार्क गर्न पाइन्न। पहिला ८ हजार तिरेको कर ३० हजार पुर्‍यायो। म त भोट सोट हाल्न जान्न। वामदेव गाउँबाट जित्न नसकेर यहाँ प्रचण्डको दबाबमा आएको हो।
कान्छा तामाङ, बालाजु
राजनीति बुझेकै ५०/५२ वर्ष भयो। ३ पटक गृह मन्त्री भएको मान्छे किन हारे? उनीबिना देश नचल्ने हो र? राजपरिवार नभएर त चलेको छ। मालेमा गए फर्किए। अहिलेसम्म वामदेवले यसो गरे भन्ने कुनै काम गरेका छन्? मैले पहिला रामवीरलाई नै भोट दिएको हो। अब अर्कोलाई दे भनेर कसले दिन्छ?
वसन्त मानन्धर, प्रदेश सभा सदस्य (काठमाडौं ७ ख)
श्रीहरी न्यौपाने, वनस्थली
वामदेवले जसरी पनि जितिहाल्छन् नि। सत्ता छ। शक्ति छ। सबथोक छ। म त कांग्रेसलाइ भोट दिने मान्छे हो। तर यहाँ हाम्रो बलियो छैन।
किशोर श्रेष्ठ, खरिबोट
प्रदेशको सांसद वसन्त मानन्धर र म क्लासमेट हो। सरस्वती क्याम्पस पढेको। पहिला वसन्तले भनेर रामवीरलाइ भोट दिएको हो। एमालेलाई भोट दिएको थिएँ। हामी क्याडर होइन। तर मान्छे हरेर भोट परिवर्तन हुन्छ।
प्रदीप प्रधान, ढुंगेधारा
रामवीरले राजीनामा दिए भन्ने सुनें। यो राम्रो होइन। पोहोर भोट माग्दा जनताका घरघरमा, टोलमा पुगेर गरेका विकासका वाचा खै पूरा गरेको? त्यसै अलपत्र छाडेर हिँड्ने? सडक बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलाम्मे छ। महानगरको पैसाले ढल बनाउन खोजेको त्यही पनि अपुरो छ। म १६ वर्षदेखि ढुंगेधारा क्षेत्रमा छु। यो सडक जस्ताको तस्तै छ। ढलको उचित निकास छैन, पानी परेपछि सडक जलमग्न हुन्छ। वृद्धवृद्धालाई पाँच हजार भत्ता दिन्छु भनेर भोट मागे, धोका दिए। रामवीरले राजीनामा दिएर जनतालाई धोका दिए। जनमतको खिल्ली उडाए। अब यो क्षेत्रमा वामदेव गौतम चुनाव उठ्न कुन मुखले आउने? वर्षवर्षदिनमा चुनाव गरेर राज्यले धान्छ? हाम्रो करको पैसा यसरी उडाउन पाइँदैन। उपनिर्वाचन भयो भने वामदेवको पक्षमा मत दिन गाह्रो छ। बर्दियामा पराजित भएका उनलाई हामीले किन मत दिने?
लक्ष्मीनायण महर्जन, ढुंगेधारा
मंसिरमा भोट दिएर जिताएको अर्को मंसिर नआउँदै रामवीरले छाडेछन्? तपाईंका कुरा सुनेर म त छक्क परें। राजीनामा दिएकै हो र भन्या? रामवीरले के सोचेर राजीनामा दिएको होलान्? मैले चिया पसलमा त कुरा सुनेंको थिएँ। तर पत्याएको थिइनँ। रामवीरले राजीनामा दिनु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो अरु के भन्नु र? हाम्रो मतमाथि घात भो। हेर्नुस् न यो ढुंगेधारामा पानी आउन छाडेको दश वर्ष हुन लाग्यो। पहिले हिउँदमा पनि पानी आउँथ्यो अहिले बर्खामा पनि आएन। ढुंगेधारादेखि राधाकृष्ण मन्दिरसम्म दश/बाह्रवटा छाप्रा देखिन्थ्ये। मैले यसरी यहाँ घरैघर होला, हिँड्ने बाटो पनि नहोला भनेर सोचेको थिइनँ। यस्तो अव्यवस्थित सहरीकरण छ। नेता मतलव गर्दैनन्। जनताका समस्या, पीडा एकातिर छ नेताहरु चुनावमात्रै गर्ने कुर्सी ताक्ने, हामी किन भोट दिने यिनीहरुलाई अब? उपचुनाव भयो भने म भोट दिन जान्न होला। वृद्धभत्ता बढाउँछु भने बढाएनन्। धारा छ पानी आउँदैन। रिङ रोडभित्र मेलम्चीको पानी पनि नदिने भनेका छन्। राज्यले हामीलाई केही सेवा दिएनजस्तो लाग्छ। आफ्नो क्षेत्रबाट जितेका नेता पनि राजिनामा दिएपछि अर्काको ठाउँको नौलो नेताले झन् के हेर्ला र?
टंकबहादुर जोशी, ढुंगेधारा
मेरो घरखेत केही छैन। दश वर्षजति भयो तरकारी बेच्छु। कोठा बाहलमा लिएर बसेको छु। हामीले भोट दिएर जिताएका रामवीरले वामदेवका लागि ठाउँ छाडे रे भन्ने सुनें। अल्लि खल्लो भो। किन वर्षदिनमै भागे होलान्? उनले जनताका वाचा पूरा गरेनन्। वामदेव यस क्षेत्रबाट उठ्लान् नउठ्लान् तर रामवीरले आफ्नो राजनीति दाउमा राखे। उनले अब टिकट पाउँदैनन् होला। दुई पटक जिताएको मान्छे यसरी भाग्ने हो त? हामीजस्ता गरिव, निमुखालाई केही हेर्लान् भनेको उनी सांसद नै नभएपछि झन् के हेर्लान् र? वाटो बनाउनुपर्ने छ। ढुंगेधारा नजिक राजकुलो छेउबाट नयाँ बाटो खोल्ने भनेर घरघरमा चिन्ह लगाएका थिए। अहिलेसम्म काम सुरु गरेनन्। यहाँ दुई/चारवटा घर भत्काएर वाटो बनाउनुपर्नेछ। विकास निर्माणमा सहयोग गर्लान् भनेको झन् राजिनामा दिए रे। अव किन भोट दिने हामीले? नदिने होला। विश्वास भएन नि।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज २५, २०७५, १०:१९:००